कार्य इंस्टाग्राममा अवरुद्ध 🥇 अनुयायी ▷ 🥇
यदि तपाईं यस पृष्ठमा पुग्नुभयो भने, हामी मान्दछौं कि इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई सजाय दियो। तपाईं एक्लो हुनुहुन्न यदि यसले तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउँदछ। हालसालै, इन्स्टाग्रामले विभिन्न कारणका कारण मानिसहरूलाई टिप्पणी र मनपर्ने चित्रण गर्नबाट रोक्दै आएको छ। यस पोष्टमा, हामी तपाईंलाई कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ भनेर बताउँछौं कार्य इंस्टाग्राममा रोकियो।
जबकि मानिसहरूलाई ब्लक गर्न इन्स्टाग्रामको मुख्य उद्देश्य बट्स नियन्त्रण र स्प्याम कम गर्नु हो, धेरै निर्दोष मानिसहरू पनि यसको क्रोधमा छन्। यदि तपाईं तिनीहरू मध्ये एक हुनुहुन्छ भने, हामी यहाँ तपाईंलाई मद्दत गर्न छौं।
ईन्स्टग्राम अर्थमा के कार्य ब्लक हुन्छ?
जब इन्स्टाग्रामले पत्ता लगाउँदछ कि विशेष प्रोफाइलले स्पाम गतिविधिहरू प्रदर्शन गरिरहेको छ, यसले केहि समयको लागि रोक्छ र तिनीहरूलाई त्रुटि सन्देश देखाउँदछ जुन "कार्य ब्लक गरिएको" भन्छ।
यो इन्स्टाग्रामको खराब गतिविधिहरूका लागि मानिसहरूलाई सजाय दिने तरिका हो। जब तपाईं यो सूचना प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं टिप्पणी गर्न वा इन्स्टाग्राममा छविहरू मनपर्न सक्नुहुन्न।
म किन इन्स्टग्राममा कमेन्ट वा मनपर्दैन?
इन्स्टाग्रामको बोल्ड चाल पछाडि थुप्रै कारणहरू छन्। तिनीहरू मध्ये केही हुन्:
तपाई अनुसरण गर्दै हुनुहुन्छ र आक्रामक भई मानिसहरूलाई उपेक्षा गर्दै हुनुहुन्छ।
तपाईंले आफ्नो फोटोहरूमा लाइकहरू लिनको लागि तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुभयो।
तपाईंले अधिक पाउनको लागि तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोग प्रयोग गर्नुभयो अनुयायीहरू वा स्वचालित रूपमा अनुसरण गर्न र स्वचालित रूपमा निम्न रोक्न।
तपाईंले समान टिप्पणी धेरै चोटि प्रयोग गर्नुभयो।
तपाईंसँग छोटो अवधिमा धेरै छविहरू मनपराउने बानी छ।
यदि तपाईं माथि उल्लेखित कुनै पनि क्रियाकलाप प्रदर्शन गर्न दोषी हुनुहुन्छ भने, इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई स्प्यामको रूपमा पत्ता लगायो र यसकारण, तपाईंलाई ब्लक गरिएको छ।
इंस्टाग्राममा ब्लाक गरिएको कार्यबाट कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ?
1 मोबाइल डाटामा स्विच गर्नुहोस्
यदि इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई ब्लक गरेको छ भने सम्भव छ कि इन्स्टाग्रामले तपाईंको IP ठेगाना रोकेको छ र तपाईंको खाता होईन। तपाईले प्रयोग गर्नु पर्ने पहिलो समाधान भनेको तपाईको वाइफाइ प्रयोग गर्नुको सट्टा मोबाइल डेटामा स्विच गर्नु हो।
2 24-48 घण्टाका लागि सबै इन्स्टाग्राम गतिविधिहरू रोक्नुहोस्
यदि माथिको समाधानले काम गर्दैन भने, तपाईंले २ Instagram--24 घण्टा सबै इन्स्टाग्राम गतिविधिहरू रोक्नु पर्छ। तपाईंले आफ्नो खातामा ब्रेक दिन आवश्यक छ। म इन्स्टाग्राममा कसैलाई मनपर्दैन, टिप्पणी गर्दिन वा फलो गर्दिन। इन्स्टाग्राममा ब्रेक लिनुहोस् र 48 48 घण्टा पछि लग इन गर्नुहोस्।
3 अन्य सामाजिक नेटवर्कमा लिंक गर्नुहोस्
किनकि इन्स्टाग्रामले तपाईंलाई स्प्याम खाताको रूपमा ट्याग गरेको छ, अन्य सामाजिक नेटवर्कहरू तपाईंको इन्स्टाग्राम खातामा लिंक गर्न प्रयास गर्नुहोस्। यसले यस तथ्यलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्दछ कि तपाईं वास्तविक व्यक्ति हुनुहुन्छ र रोबोट होइन।
तपाईंको इन्स्टाग्राम खातासँग अन्य सामाजिक नेटवर्कहरू लिंक गर्न, एन्ड्रोइडको मामलामा थ्री-डट मेनू ट्याप गर्नुहोस् र आईफोनको मामलामा तपाईंको प्रोफाइल पृष्ठमा सेटिंग्स आइकन। त्यसो भए, लिंक गरिएको खाता विकल्पमा थिच्नुहोस् र तपाईंको खाताहरू थप्नुहोस्।
4 तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू स्थापना हटाउनुहोस्
अवरुद्ध हुने मुख्य कारणहरू मध्ये एक तपाईंको मनपर्ने र अनुयायीहरूलाई बढाउन तेस्रो-पार्टी अनुप्रयोगहरू प्रयोग गर्नु हो। यदि तपाईंले यी कुनै पनि अनुप्रयोगहरू स्थापना गर्नुभयो भने, यो समयलाई विदाइ दिन हो। तिनीहरूलाई अनइन्स्टल गर्नुहोस् र तपाईंको खाता यी अनुप्रयोगहरूबाट सकेसम्म चाँडो हटाउनुहोस्।
5 इन्स्टाग्रामलाई सूचित गर्नुहोस्
यदि तपाईंलाई लाग्छ कि तपाईंले केहि गलत गर्नुभएको छैन भने, तपाईं इन्स्टाग्राममा अपील गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंले समस्यालाई इन्स्टाग्राममा रिपोर्ट गर्न आवश्यक छ र तिनीहरूले तपाईंको केसमा पुनर्विचार गर्न सक्छन्।
इन्स्टाग्राममा रिपोर्ट गर्नको लागि, आफ्नो फोनमा इन्स्टाग्राम अनुप्रयोग खोल्नुहोस्। तपाईंको एन्ड्रोइड उपकरणमा, माथि दायाँ कुनामा अवस्थित तीन-डट मेनूमा ट्याप गर्नुहोस्। आईफोनमा, सेटिंग्स आइकन ट्याप गर्नुहोस्।
विकल्पहरूमा, तल स्क्रोल गर्नुहोस् र समस्या रिपोर्ट रिपोर्ट विकल्प ट्याप गर्नुहोस्। पप-अप विन्डोमा, समस्या रिपोर्ट गर्नुहोस् चयन गर्नुहोस्। तपाईंको समस्या इन्स्टाग्राममा बुझाउनुहोस् र सबमिट बटन थिच्नुहोस्। यसलाई पेश गरेपछि, तपाईं प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरूको जवाफको लागि प्रतिक्षा गर्नुहोस्।
6 इन्स्टाग्राममा ब्लक गरिएको कार्यको साथ धैर्य गर्नुहोस्
रोम एक दिनमा निर्माण गरिएको थिएन र तपाइँको खाता एक दिनमा पुन: संग्रहित गरिने छैन। वास्तवमा, यो हुन सक्छ, यदि तपाईं वास्तवमै भाग्यशाली हुनुहुन्छ।
तर, प्राय जसो केसहरूमा तपाईले धैर्यता देखाउनु पर्छ। यसले तपाईंको इन्स्टाग्राम खाता फिर्ता पाउन Instagram--4 हप्ता लिन सक्दछ।
कसरी इन्स्टग्रामबाट ब्लक हुन सकिन्छ
यदि तपाईंको खाता एक अस्थायी अवरोध पछि पुनःस्थापित गरिएको छ भने, भविष्यमा सावधान रहनु उत्तम हुन्छ। इन्स्टाग्रामद्वारा अवरुद्ध हुनबाट बच्न निम्न सल्लाहहरू छन्।
1 कार्यहरूको संख्या घटाउनुहोस्
मलाई ज्यादा मनपर्दैन र टिप्पणी गर्दिन। तपाईंले बहुबिध छविहरू मनपराउनु भन्दा पहिले सँधै केहि सेकेन्ड राख्नु पर्छ। साथै, उही टिप्पणी बारम्बार पोस्ट नगर्नुहोस्।
तपाईंको कार्यलाई मोडरेट गर्न जारी राख्नको लागि मान्य छ र अनपल गर्नुहोस्। प्रत्येक दिन पछ्याउने व्यक्तिको संख्या निरीक्षण गर्नुहोस्।
2 तेस्रो-पक्ष अनुप्रयोगहरू प्रयोग नगर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम नक्कली लाइक, टिप्पणी र फलोअरहरूको साथ धेरै कडा छ। इन्स्टाग्राममा लोकप्रियता प्राप्त गर्न बट्स प्रयोग नगर्नुहोस्।
3 तपाईंको इन्स्टाग्राम प्रोफाइल पूरा गर्नुहोस्
तपाईंको प्रोफाइलमा उपयुक्त जीवनी, ईमेल ठेगाना र फोन नम्बर थप्न निश्चित गर्नुहोस्। साथै, माथि उल्लेख गरिए अनुसार, अन्य सामाजिक नेटवर्कहरू तपाईंको खातामा लिंक गर्नुहोस् इन्स्टाग्राममा ब्लक गरिएको कार्यबाट बच्न।
हामी आशा गर्दछौं कि माथिको समाधानहरूले तपाईंलाई तपाईंको खाता अनलक गर्न मद्दत गरेको छ। हामी सुझाव दिन्छौं कि होशियार रहनुहोस्, किनकि थप शicious्कास्पद गतिविधिले तपाईंको ईन्स्टाग्राम खातालाई स्थायी रूपमा रोक्न सक्छ।
यदि तपाईंलाई इन्स्टाग्राममा 'अवरुद्ध कार्य' प्रतिबन्ध हटाउन कुनै अन्य विधिको बारे थाहा छ भने, कृपया हामीलाई तलका टिप्पणीहरूमा जानकारी दिनुहोस्।